My iPhone manotsi Dzakanyangarika! Usanetseke. Heino Kugadzirisa! - Iphone
facetime isiri kushanda pa iphone 5
sei kuzadza odha yemari
maitiro ekuisa emergency emergency pa iphone 6
kuvhura iphone 4s isina bhatani remagetsi
My iPhone manotsi Dzakanyangarika! Usanetseke. Iyo Kugadzirisa!
Kim paakavhura iyo Anoti app pane yake iPhone, akaona kuti akawanda manotsi ake vanga vaenda . Akadzibvisa netsaona here? Zvichida kwete. Asingazive kwekuwana mapepa ake asipo, Kim akakumbira rubatsiro rwangu muPayette Forward Community, uye ndakafara kutora nyaya yacho. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura nei zvinyorwa zvako zvanyangarika kubva ku iPhone yako , kwavari kuvanda , uye kuti ungadzosa sei .
Kunzwisisa Iko Zvinyorwa Chaizvoizvo Rarama
Kungofanana neemail yako, vanobatika, uye makarenda, zvinyorwa zvaunoona pane yako iPhone zvinowanzo chengetwa 'mugore'. Mune mamwe mazwi, zvinyorwa pa iPhone yako zvinowanzo chengetwa pane sevha yakasungirirwa kune yako email kero.
Vanhu vazhinji havazive kuti maakaundi maemail amakaisa pane yako iPhone anogona kuita zvakawanda kupfuura kungotumira nekutambira email. Maakaundi mazhinji emaemail, kusanganisira iwo aunowana kuburikidza neAOL, Gmail, uye Yahoo, unokwanisa kuchengeta mazita, makarenda, uye manotsi kuwedzera kune yako email.
Kana zvinyorwa zvanyangarika, kazhinji hazvina kubviswa. Iwo manotsi anorarama pane sevha yakasungirirwa kune yako email kero (Gmail, Yahoo, AOL, nezvimwewo), uye pane dambudziko pakati pe iPhone yako uye sevha.
Zvikonzero Zvakajairika Nei Zvinyorwa Zvichinyangarika Kubva kuPhones
Kana iwe uchangobva kudzima email kero kubva kune yako iPhone, pamwe wabvisa zvinyorwa kubva ku iPhone yako futi. Hazvireve kuti dzakadzimwa. Zvinongoreva yako iPhone haigone kuwana ivo zvakare. Paunoseta iyo email account zvakare, ese ako manotsi anodzoka.
Kana iwe wanga uchinetseka kubatanidza kune email account nguva pfupi yapfuura, iyo inogona kunge iri imwe chiratidzo. Pamwe iwe nguva pfupi yadarika wakachinja yako email password online, asi hauna kuisa iyo nyowani nyowani pane yako iPhone. Paunoenda ku Zvirongwa -> Tsamba, Mahofisi, Makarenda pane yako iPhone, tinya pane yako email account, uye gadziridza iyo password, zvese zvinofanirwa kutanga kushanda zvakajairika zvakare.
Ndingaite Sei Ini Kuti Ndizive Kuno Yangu iPhone manotsi Akachengetwa?
Vhura iyo Zvinyorwa app pane yako iPhone, uye tsvaga iyo yero museve wekumashure mukona yekumusoro kuruboshwe rekona. Tinya pamuseve iwoyo uye iwe uchaona rondedzero yemaakaunzi ese ari kuyananisa manotsi pane yako iPhone. Unogona kuona anopfuura rimwe. Nzvimbo yekutanga yekutarisa yako asipo manotsi iri mune yega yega folda. Tinya pane yega folda kuti uone kana ako akashaikwa manotsi akachengetwa mukati.
Kuwanazve Pasina Manotsi Uchishandisa Zvirongwa
Kana usati wawana zvinyorwa zvako, nzvimbo inotevera yatino tarisa iri mukati Zvirongwa -> Tsamba, Mahofisi, Makarenda . Tinya pane yega yega email account uye ita shuwa kuti maNotes akavhurwa kune yega yega account.
Kana iwe uchangobva kubvisa account yeemail kubva kune yako iPhone, wedzera iyo zvakare uye batidza maNote kana iwe uchimisa. Dzokera kuApple app, tinya museve weyero kumashure , uye tarisa yega yega email account yeakafa maNotes.
Kuchengeta Zvinyorwa Zvako Zvakarongwa
Izvo chaizvo hazvidi kuti uenzanise zvinyorwa zvako pane dzakawanda maakaunzi emaemail. Muchokwadi, ini ndinoodza moyo izvo nekuti zvinogona kuwana chaizvo kuvhiringidza! Parizvino, isu tiri kuyedza kutsvaga ako akashaikwa manotsi - ndosaka tiri kuvashandura vese.
Kuti ugare wakarongeka uchienda kumberi, zvakakosha kuti uzive kupi urikuchengeta zvinyorwa zvako. Kana iwe uri kushandisa Siri kugadzira zvinyorwa zvako, unogona kuseta iyo default account yezvinyorwa zvitsva mukati Zvirongwa -> Zvinyorwa .
Zvikasadaro, iwe unofanirwa kuziva kuti ndeipi account iwe yauri kushandisa kana iwe uchigadzira nyowani nyowani muAnotes app. Usati wagadzira chinyorwa chitsva, tinya museve weyero kumashure mukona yekumusoro kuruboshwe rekona uye sarudza dhairekitori. Nhau dzakanaka ndedzekuti iyo Notesapp inofanira kunhonga iko kwawakasiira pese paunovhura.
Kurudziro yangu ndeye kushandisa sevashoma maakaunzi sezvaunokwanisa kuyananisa manotsi. Mushure mekuti iwe 'utore hesheni' yekuti pane zvinyorwa zvako zvakachengetwa, ini ndinokurudzira kudzokera ku Zvirongwa -> Tsamba, Mahofisi, Makarenda , uye nekuremadza maNotes emaakaundi ausingashandise kuyananisa zvinyorwa zvako.
Pane yangu iPhone, ini ndinoshandisa maakaundi maviri kuyananisa manotsi. Kutaura chokwadi, chikonzero choga chandinoshandisa piri maakaundi nekuti ini handina kutora nguva yekuchinjisa zvinyorwa zvangu zvekare zveGmail kuenda kuCloud izvozvi. Sezvineiwo, vanhu vazhinji vanofanirwa kungoshandisa imwe account kuenzanisa zvinyorwa zvavo.
iPhone Notes: Yakawanikwa!
Mubvunzo waKim nezvekuti manotsi ake e iPhone aive aenda waive wakanaka, nekuti ndewe dambudziko rakajairika . Nhau dzakanaka ndedzekuti dambudziko iri rinowanzo kuve nemhedzisiro inofadza. Kana zvinyorwa zvanyangarika kubva pa iPhone, hazvisi nekuti izvo zvakabviswa - ivo vangorasika. Ndingafarire kunzwa nezvezviitiko zvako nekuwanazve zvakarasika manotsi pane yako iPhone, uye kana uine chero mimwe mibvunzo, inzwa wakasununguka kuita zvakaitwa naKim ndokuzvitumira muPayette Forward Nharaunda.
Kutenda nekuverenga, uye yeuka kuibhadhara kumberi,